Nhau - China michina yekuveza matanda inoshandura uye inovandudza smart smart
China yekuveza michina inoshandura uye inovandudza smart smart kugadzira
China yekuveza michini indasitiri ichapinda padanho rekuchenjera kugadzira, kushandura, uye kusimudzira kune yakangwara uye yepamusoro-magumo kukura.
Kuveza michini ndiyo indasitiri hwaro hwekugadzira fenicha, iyo yekugadzira huni indasitiri, uye mamwe maindasitiri. Nekuvandudzwa kwemararamiro ehupenyu hwevanhu, izvo zvinodikanwa zvemidziyo uye hupenyu hwepamba zviri kuwedzera nekukwira. Woodworking michina iri kutamba chinonyanya kukosha basa muChina fenicha uye pamba hupenyu maindasitiri. Kunze kwezvo, kuveza michina kunotora Qingdao, iyo Yangtze Rwizi Delta, uye Guangdong senzira huru yekugadzira nekugadzira mataundi kuti ape mutambo uzere kune zvakanakira kusangana kwemabhizimusi uye nekupa yakakwana seti michina yekugadzira mhinduro nemidziyo.
Kukwira kwemidziyo yakasarudzika muChina kuchaita kuti michina yekuveza huni ivandudze uye kutsiva echinyakare michina yekuveza huni nechinhu chinogonja icho chinowirirana neyakagadziriswa fanicha yekugadzira. Ikozvino yakagadziriswa fenicha musika wekupinda mwero iri pamusoro pe20%, inotarisirwa kunge iri makore matatu kusvika mashanu. Icharamba ichikura kusvika makumi mana muzana; Zvakare, kuramba kuchitsakatika kwehuwandu hwevanhu hweChina hwakatungamira mukukura kwemitengo yevashandi, uye iyo yekupedzisira-fenicha fenicha yezvigadzirwa kunyatso Iko kusimudzira kwekushandisa kwakaunzwa nekuwedzera kuri kuenderera mumari inoraswa yevagari vemuChina nekumaruwa. Kutsiva kwedzimba zhinji dzekare nefenicha nyowani, kushongedzwa kwenguva imwe chete kwedzimba dzichangobva kutengeswa, uye fenicha ine marangi zvakaunza kudiwa kwakasimba kwemusika kumusoro. Izvi zvichawedzerawo China fenicha yekugadzira indasitiri uye yekuveza michina indasitiri ichachengetedza kumwe kukura kwekukura mumakore mashanu anotevera.
Guta reQingdao kuChina rine zita rekuti "China's Woodworking Machinery Guta" uye ndiro rinomiririra guta reindasitiri yekuveza muInlandland China. Nekuda kwekukurumidza kukura kweChina fenicha indasitiri, vazhinji vagadziri vakabatana mumusika uye Qingdao Woodworking Machinery muChina munzvimbo ine densest uye yakawanda kwazvo yekuveza michina vagadziri muChina. Yepagore maindasitiri anoburitsa kukosha kweQingdao's yekuveza indasitiri sumbu Qingdao ingangoita RMB mabhiriyoni mashanu uye iyo yegore yekutengesa kukosha ingangoita mamirioni mazana maviri emadhora ekuUS. Kune dzinenge chiuru chemvumo. Izvo zvigadzirwa zvinofukidza huni-yakavakirwa pani michini, paneli fenicha, yakasimba huni fanicha, kupenda kupenda, Guruva kubvisa michina inogona kupa otomatiki ekugadzirisa mhinduro nemidziyo kune iyo yese chirimwa.
Kubatanidza rubatsiro rwezvinhu zvehurumende, kukurudzira mabhizinesi kushandura nekuvandudza vakazvimirira, kubatsira mukusimudzira shanduko yeindasitiri yemichina, uye kutora nzira yehungwaru uye yepamusoro-magumo.